अर्की आइ-माई संग लगेर बाउले आमालाई रा-तिको १ बजे यस्तो गरे। तिहा-रको दिन आमालाई बाउको का-रण यस्तो भो - Public 24Khabar
Home News अर्की आइ-माई संग लगेर बाउले आमालाई रा-तिको १ बजे यस्तो गरे। तिहा-रको...
अर्की आइ-माई संग लगेर बाउले आमालाई रा-तिको १ बजे यस्तो गरे। तिहा-रको दिन आमालाई बाउको का-रण यस्तो भो
एसियन हाइवे’ सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै नेपालको ग्रामीण स्तरको व्यवसायले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्भावना बोक्ने आशा व्यवसायीको छ। झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा उद्यमी टीकाराज ढकाल भन्छन्, ‘एसियन हाइवेका कारण गाउँले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज सहजै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्नेछ।’ उक्त हाइवे पूर्वदेखि पश्चिम नेपालसम्म जोडिँदा देशका हरेक क्षेत्रमा फाइदा हुने ढकालले बताए।
Previous articleकुनैपनि हालतमा राजीनामा दिन्न भनेका ओलीले यो के गरे ? देशभरका नेताकार्यकर्तामा खुशीयाली
Next articleविश्वमै ह’लचल मच्चा’उने ‘एसियन हाइवे’ यसरी जोडियो नेपाल ! सकियो नेपालीको प्रतिक्षाको घडी (भिडियो हेर्नुहोस्)